6 Ezighi ezi okwu ndi ozo | Martech Zone
Wednesday, April 18, 2012 Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Douglas Karr
Ka anyị na-aga n'ihu ịbanye na nyocha miri emi na nke miri emi na ndị ahịa na ụdị mkpụrụokwu nke na-adọta okporo ụzọ ọchụchọ, anyị na-achọpụta na ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere echiche na-ezighi ezi mgbe ọ bịara na nyocha isiokwu na ojiji.
Otu peeji nwere ike ịkwado nke ọma Ọtụtụ isiokwu. Ndị mmadụ na-eche na ọ dị ha mkpa inwe otu peeji nke isiokwu ọbụla ha chọrọ… Ọ bụghị ikpe. Ọ bụrụ na ị nwere peeji nke na-arụ ọrụ nke ọma maka isiokwu, mkpụrụokwu ndị ọzọ dị mkpa nwere ike ịkwado nke ọma! Kedu ihe kpatara ị ga - eji na - agbakwunye peeji peeji nwere ọdịnaya ugboro ugboro mgbe ị nwere ike bulie otu ibe na ọkwa maka otu okwu?
Keywords dị elu site n'ọkwá dị elu nwere ike iduga ọtụtụ nleta mana nke ahụ nwere ike ịbụ mmebi nke ọnụego mgbanwe gị. Akara isiokwu na njikọta ala nwere ike iwetara gị ndị ahịa kachasị… ọbụlagodi na azụmahịa gị abụghị nke obodo.
Ingnye ọkwa na ọdụ ogologo (olu dị ala, mkpa dị elu) Keywords apụtaghị na ị enweghị ike ịzọ ọkwa na asọmpi dị elu, isiokwu dị elu. N'ezie, anyị na-achọpụta na dịka ndị ahịa anyị na-akwado ọnụ ọgụgụ dị elu nke ogologo ọdụ okwu ọdụ, ha na-agbasasị iwepụ oge na usoro asọmpi dị ukwuu. Na agbara abụghị eziokwu. Naanị n'ihi na ị nọ n'usoro asọmpi asọmpi, ọ pụtaghị na ị ga-etolite na usoro ọdụ ogologo ogologo metụtara. Ogologo ọdụ dị ogologo ka ịkwado ọdịnaya dị mkpa.
Inwekwu okporo ụzọ apụtaghị mgbe niile ọzọ mgbanwe. Ọtụtụ oge, ọ na-apụta ọnụọgụ ego dị elu na ndị ọbịa na-enwe nkụda mmụọ n'ihi na ha enweghị ike ịchọta ihe ha na-achọ.
Iji isiokwu na nkọwa nke meta nwere ike ọ gaghị emetụta ọkwa gị, mana ọ ga - eme ka ị pịa site na nsonaazụ ọchụchọ engine (SERP). Cheta na isiokwu ndị achọrọ ka dị ike na SERP, na-adọrọ uche gaa na ntinye gị ọ bụghị ndị ọzọ.
Ọtụtụ ndị anaghịdị eji okwu ọchụchọ dị mkpụmkpụ, kama na-ahọrọ maka ịpịnye ajụjụ niile n'ime engines ọchụchọ. Inwe Ajụjụ (ajụjụ a na-ajụkarị) atụmatụ nwere ike ịbụ usoro ojiji ojiji dị egwu.
Enwere ndị ọzọ?
Tags: isiokwunnyocha nyochaisiokwu ojijiKeywords
thnx maka ozi a, ma na-eche oge adịghị anya
Okporo ụzọ dị mma, mana ntụgharị dị mma. Ọ dị mkpa itinye nnukwu ọdụ n'ime ngwakọta. Ndị mmadụ na-eji ọdụ ọdụ ọdụ dị ogologo na-achọ ihe doro anya. Ha nwere ike ibugharịrị nyocha nyocha gara aga ma enwere ohere ịtụgharị.